Webinar fanombanana (14 septambra 2020) - Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra iraisam-pirenena
Septambra 10, 2020 Elisabeth Uncategorized
Misy tombana eo ivelan'ny trano fitehirizanao ara-dalàna ve? Toa asa be loatra ve izany? Manontany tena ve ianao hoe maninona ny programa sasany no mitady fankatoavana ho an'ireo mpampianatra azy ireo? Raha misy mahazatra azy ireo, dia mamporisika anao izahay hanao ny alatsinainy 14 septambra rehefa manome ohatra amin'ny antsipirihany momba ny zavatra ataon'izy ireo ao amin'ny foibem-panoratan'izy ireo i Jennifer Daniel, Marilee Brooks-Gillies, ary Shareen Grogan. Mariho ny kalandrieo ho an'ny faritry ny fe-potoana misy anao ary manaraha anay!
11 AM Pasifika
12 PM Tendrombohitra
1 PM Afovoany
2 PM Atsinanana
Ny mpikambana IWCA rehetra dia tongasoa eto, koa aza misalasala manasa ny namanao. Ity dia fivoriana tonga sy mandeha; raha tsy afaka manatrika afa-tsy amin'ny ampahany amin'ny webinar ianao, dia mbola tongasoa anao hiaraka aminay. Ny tranonkala dia hatao amin'ny alàlan'ny Zoom. Azafady mba mifandraisa amin'i Molly Rentscher, Mpandrindra ny programa IWCA Mentor Match, ho an'ny rohy Zoom: mrentscher@pacific.edu